लामो समयदेखि मगर समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजनीतिक उत्थान र विकासमा लागिरहेका व्यक्तिको नाम हो नवीन रोकामगर ।
समुदायको अधिकार र पहिचान लडेरै मात्र प्राप्त हुने विचार राख्दै आएका रोका नेपाल मगर विद्यार्थी संघको आर.आर. क्याम्पस काठमाडौंमा सदस्य हुँदै सामाजिक संस्थामा प्रवेश गरेका थिए । रोल्पाको उवा—५ स्थायी घर भएको रोका रोल्पा–काठमाठौं सम्पर्क मञ्चको अध्यक्ष भएर दुई कार्याकाल काम गरे । नेपाल मगर सांस्कृतिक कलाकार संघको केन्द्रीय सचिव, नेपाल मगर संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै हाल महासचिव छन् ।
मगर समुदायको साझा संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल मगर संघको यही बैशाख १८ देखि २२ गतेसम्म चितवनमा ११औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका नवीन रोकामगरसँग महाधिवेशन र उम्मेदवारीबारे esamata का लागि अर्जुन जम्नेलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ :
अधिवेशन तयारी कस्तो भइरहेको छ <
अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
सम्मेलनमा प्रतिनिधि कति, कहाँकहाँबाट आउँछन् उद्घाटनमा को को आउँछन् ?
नेपालको ६८ जिल्ला, ६ वटा भातृ संगठन र १२ वटा विदेश शाखाबाट पाँच पाँच जनाको दरले प्रतिनिधि आउने निश्चित भएको छ । आजीवन सदस्यहरुबाट पनि प्रतिनिधिहरु आउँछन् । १८ गते सभामुख ओनसरी घर्तिमगरको प्रमुख आतिथ्यमा विशाल जनसभासहित उद्घाटन हुँदैछ ।
कुनै पनि बेला हिजो खोसिएका राज्य फिर्ता गर्न सक्छन् भन्ने षड्यन्त्रको साथ मगरहरुलाई एकै ठाउँ बस्न दिनु हुँदैन भनेर मगरात भूमिलाई तीन खण्डमा विभाजित गरेको हामीले बुझेका छौं । विभाजन गर्नु भनेको शासकहरु डराउनु हो ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो । तपाईंंको उम्मेदवारी केका लागि <
मगर संघ पहिला भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मुद्दामा सीमित थियो । अहिले मगरात स्वायत्त राज्यको माग उठिरहेको छ । घोषित ‘जाली’ संविधानले समेत मगरलगायत उत्पीडित आदिवासी जनजाति, क्षेत्र र महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित नगरेको अवस्था हो । त्यसमाथि पनि मगर समुदायको ऐतिहासिक मगरात भूमिलाई तीन चिरामा छिन्नभिन्न बनाएको छ । त्यसमा हाम्रो विल्कुल असहमति छ । हाम्रो भूमिलाई तीन चिरा पार्नु भनेको मगरलाई सिद्ध्याउनु हो । मगरका भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक ऐतिहासिक पहिचानलाई मेटाउनु हो । त्यो भनेको इतिहास नामेट पार्नु हो । त्यसकारण तीन चिरा पारेको मगरात भूमिलाई एकीकृत मगरातको लागि लड्ने मेरो एउटा मुद्दा हो । हिजोदेखि आजसम्म मगरातको लागि अग्रपंक्तिमा लाग्ने मान्छेहरुमध्ये एउटा नवीन रोका पनि हो ।
दोस्रो मगर समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक समृद्धी र रुपान्तरणको लागि हो । तेस्रो कुरा, मान्छे स्वभावैले चेतनाले विकास हुने गर्छ । चेतनाले रुपान्तरण गर्छ । चेतनाको श्रोत भनेको शिक्षा हो । मातृभाषाका शिक्षाको व्यवस्था नभएको कारण शिक्षा लिनबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ मगर समुदाय । शैक्षिक विकासको लागि पनि, भाषिक, सांस्कृतिक विकास र अधिकारको लागि पनि, मगरहरुलाई राज्यको हरेक अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता र मगरात राज्य प्राप्तिको आन्दोलन माथि उठाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुबीच आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्ने आइरहेको छ । हो <
राज्य, समाज नै त्यसैमा चलिरहेको छ । जनताको चेतना जुन ढंगले उठाइदिनुपर्ने हो त्यो भएन । जब मान्छेको चेतना कमजोर हुन्छ तब बस्तुले मान्छेलाई किन्ने, बस्तुले मान्छेलाई बिगार्ने हुन्छ । मगर संघ महाधिवेशनको बारेमा पनि आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्ने कता—कता सुन्नमा आएको छ ।
मजस्ता पहिचानवादी उम्मेदवारको विरुद्धमा पहिचानविरोधीहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्ने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदैछ है भन्ने मैले पनि सुनेको छु । तर, मलाई के लाग्छ भने अहिलेको ११औं महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकहरु हिजोको भन्दा फरक चेतनाका छन् । हिजोको भन्दा परक स्तरका छन् । त्यसकारण उनीहरुले मुद्दालाई हेर्नेछन् । विचारलाई हेर्नेछन् । र उम्मेदवारको इमान्दारीता, क्षमता, इतिहास र योगदानलाई हेर्नेछन् । सही मान्छेलाई भोट दिनेछन् । त्यो सही मान्छे नवीन रोकमगर नै हुनेछ भन्नेमा ढुक्क छु ।
तपाईंले चाहिँ कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ <
मेरो त खर्च गर्ने पैसाको हुँदैन । मेरो खर्च विचार, मुद्दा र बलिदानको हुन्छ । पैसाले प्रतिनिधि किन्ने कुरामा म विल्कुल सहमत छैन ।
एकापट्टि मगरात आन्दोलन र अर्कोपटि सिङ्गो पहिचानवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने छौं । त्यहाँभित्रको राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायी सवैसँग मिलेर आन्दोलन चल्छ । मुद्दा मिल्ने सवैसँग मिलेर राष्ट्रव्यापी रुपमा संयुक्त आन्दोलन गर्छौं ।
एघारौं महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डा के के हुनेछ <
यो अधिवेशनको खासगरी दुई वटा ऐजेन्डाहरु छन् । अहिलेको संविधानले तीन टुक्रामा पारेको मगरात भूमिलाई अधिकारसहितको एकीकृत स्वायत्त मगरात निर्माणमा लाग्ने हो । दोस्रो, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धि हुनेछ । राजनीतिक अधिकारसँगसँगै सामाजिक रुपान्तरण हुनुपर्छ । सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन भयो भने पनि आर्थिक समृद्धिको पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसकारण दुईवटा मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका हौं ।
मगरात आन्दोलन अब कसरी अघि बढ्छ <
शासकहरु वा सिंहदरबारका मालिकहरुले मागेर अधिकार दिने छैनन् । संसारमा मागेर जनताले अधिकार कसैले पाएका इतिहास भेटेको छैन । जनताको न्यायपूर्ण अधिकारको लागि डलेर हारेको इतिहास पनि पाइएको छैन । त्यसो भएको कारणले ११औं महाधिवेशनपश्चात् माटोको लागि लड्ने छौं । संविधानले हाम्रो माटोलाई चिरेको छ । त्यसलाई सच्याउनको लागि लडिनेछ । दोस्रो कुरा, वर्तमान संविधानले भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रुपले सहभागिता गराउन सक्दैन । एकापट्टि मगरात आन्दोलन र अर्कोपटि सिङ्गो पहिचानवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने छौं । त्यहाँभित्रको राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायी सवैसँग मिलेर आन्दोलन चल्छ । मुद्दा मिल्ने सवैसँग मिलेर राष्ट्रव्यापी रुपमा संयुक्त आन्दोलन गर्छौं ।
मगरात त नयाँ कुरा हो नि, माओवादी जनयुद्धपछि उठेको होइन र ? इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाल भन्ने देशको प्राचीन नाम मगरात हो । भारत, तिब्बत मगरातभित्र पर्थ्यो । पछि नेपालमा रुपान्तरण भएको पाइन्छ । नेपाल भन्ने वर्तमान देशको अभ्यास मगरातबाट सुरु भएको हो । वर्तमान शासक जातिहरुले पहिले मगरातबाट सत्ता हत्याएका हुन् । राज्य खोसेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म किन मगर र मगरातलाई लगातार प्रहार भइरहेको छ । कुनै पनि बेला हिजो खोसिएका राज्य फिर्ता गर्न सक्छन् भन्ने षड्यन्त्रको साथ मगरहरुलाई एकै ठाउँ बस्न दिनु हुँदैन भनेर मगरात भूमिलाई तीन खण्डमा विभाजित गरेको हामीले बुझेका छौं । विभाजन गर्नु भनेको शासकहरु डराउनु हो ।
जनयुद्धमा लडेर पछि किन माओवादी छाड्नुभयो <
राजतन्त्रलाई परास्त गरेर गणतन्त्र स्थापित गरेको माओवादी युद्धले नै हो । जनयुद्धको जगमा टेकेर भएको १९ दिने जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो । माओवादी आन्दोलनकै छालले जनतामा पहिचानको आन्दोलन गर्ने चेतनाको विकास भएको हो ।
पहिचानको मुद्दा माओवादीले नै उठाएको हो । तर, उठाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन इमान, जमानको साथ सही ठाउमा पुर्‍याउनु ठूलो कुरा हो । पछिल्लो समयमा माओवादीका नेताहरु र पार्टी मुद्दाबाट विचलनमा आयो । त्यहाँ विचलन आएपछि हामीले पार्टी छाडेका हौं ।
पहिचानको मुद्दा माओवादीले नै उठाएको हो । तर, उठाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन इमान, जमानको साथ सही ठाउमा पुर्‍याउनु ठूलो कुरा हो । पछिल्लो समयमा माओवादीका नेताहरु र पार्टी मुद्दाबाट विचलनमा आयो । त्याहा विचलन आएपछि हामीले पार्टी छाडेका हौं । मुद्दा रहेसम्म बसियो । त्यो पार्टीमा मुद्दाले बिदा लिएपछि हामीले पनि पार्टीबाट बिदा लिएका हौं ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षमा सेना राख्ने सरकारी निर्णयको स्थानीय जनताबाट विरोध भइरहको छ । यहाँले जित्नुभयो भने यो विषय कसरी अघि बढ्नुहुन्छ <
मैले जिते पनि नजिते पनि ढोरपाटन मगरातभित्रको भूमि हो । सारा मिडियाबाट भन्दै आएको छु कि सत्ताधारीहरुले मगरात भूमिलाई तीन चिरा पारेर नपुगेर अझ भूमि कब्जा गरिरहन सेनाको ब्यारेक पठाउने निर्णय गरेका हुन् । सेना लगेर मगर लगायतका जनतालाई उठिबास गर्ने काम भइरहेको छ । त्यहाँ जनताले विरोध जनाइरहेका छन् । सरकार जवरजस्ति गरिरहेको छ । यो नेपालको लागि राम्रो संकेत होइन ।
यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिने र जनताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने शक्तिको बलमा जवरजस्त सेना पठाएर थिचोमिचो र भूमि हडप्ने काम नछोड्ने हो, भने जनताले साधारणदेखि फौजी आन्दोलनसम्मको विकास गर्न सक्छ । किनकी मगरात आन्दोलन अझै पनि फौजी आन्दोलनको रापतापमा बाँचिरहेको छ ।
पहिचानको आन्दोलन अघि बढिरहेको बेला सरकारले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर मागको सम्बोधन गरेन भने यो आन्दोलनको नेतृत्व लिन अघि सर्छु ।
अन्तमा केही छ <
मगर संघको अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धा कुनै व्यक्तिलाई जिताउने र हराउने प्रतिस्पर्धा होइन । यो राज्यद्वारा अधिकार, पहिचान खोसिएका मान्छेहरु र शासकबीचको लडाइँ हो । म पहिचान र अधिकारको पक्षमा लड्ने प्रतिनिधिको रुपमा अघि बढेको छु । हाम्रो संघर्ष व्यक्ति र जाति विशेषसँग होइन ।
साभार : इसमता डट कम
Last Updated on Thursday, 28 April 2016 16:08
Last Updated on Monday, 18 April 2016 16:04
समाज सेवीको रुपमा परिचित नेम थापा , अहिले मगर संघ युकेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । १० बर्ष बहराईनमा रहदा शयौ नेपालीको सहयोगमा दिनरात खटिनुभयो । मगर संघ बहराईन र नेपाली कलबको समेत उहाले स्थापना गर्नुभयो । झण्डै ११ बर्ष देखि बेलायतमा बस्दै आउनुभएका थापा २००६ साल देखि नै युके मगर संघको केन्द्रिय समितिमा आबद्ध हुनुहन्छ । अहिले हुन लागेको मगर संघ युकेको अधिबेशनमा आफुले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए पहिचान र अधिकार प्राप्तीको लागी थप शतरुपमा होमिने उहाको भनाई छ । एकता नै बल हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दे अघि बढ्नुभएका थापाले ब्यतिगत फाईदा भन्दा सबैको हित सम्झिएर अघि बढे सफलता प्राप्ती हुनेमा विस्वस्त हुनुहुन्छ ।
प्रस्तुत छ, राज्यसत्ता डट, कमले उहा संग गरेको यो छोटो कुराकानी ।
जन्म स्थल तनहुँ जिल्ला केशवटार गा. बि. स वडा न २ नया गाउँ, माध्यमिक स्तर (US High School Diploma)। फार्नबोरो यु. के. मा बस्छु, एक छोरी, एक छोरा सहित चार जनाको परिवार छ ।
नेम थापा को हो जस्तो लाग्छ ?
म एक साधारण व्यक्ति, बितेका करिब दुइ दसक समाज सेवामा लागे तेसैले धेरैले समाज सेविको रुपले चिन्ने गर्छन जस्तो लग्छ ।
तपाईं कुन कुन सामाजिक संस्थाहरुमा आबद्ध हुनु हुन्छ ? सामाजिक संस्थाहरुमा आबद्ध हुने कोबाट प्रेरणा पाउनु भयो र किन यसरि सामाजिक संस्थाहरुमा लाग्नु भयो ?
मगर संघ यु के, ग्रेटर रशमुर नेपाली कममुनिटी, तनहुँ जिल्ला समाज यु. के, र नया युवामा यु. के. आउनु भन्दा पहिला (US High School Diploma) कम्पनी मा करिब दस वर्ष बिताए जहाँ मेरो (US High School Diploma)मात्र नभएर social life को पनि केहि अनुभब गर्ने मौका पाए । तेती खेर अनुमानित १० हजार नेपाली रहेको देश Bahrain मा नेपाली दुताबास को त कुरै नगरौ कुनै सस्थागत नेपाली समाज पनि थिएन । धेरै दुख पाएको दाजु भाई अनि दिदि बहिनी हरुलाई सकेको सहयोग गर्दै जादा बिस्तारै समाज सेविको रुपमा चिनिन पुगेछु । Bahrain Human Rights Groupमा १३ वटा देश बाट ३५ जनाको सदस्यमा नेपाली भएकोले विश्वास गरेर होला Treasurer को जिम्मा निभाउने मौका पाए जति खेर अन्य देशहरुको बारेमा र Bahrain को कानुन को बारेमा पनि केहि अनुभब गर्ने अबसर मिल्यो फलस्वरूप मगर संघ Bahrain खडा गर्ने देखि लिएर नेपाली क्लब को अध्यक्ष पदमा सम्म सेवा गर्ने मौका पाए ।
२००६ मा यु. के. आए देखि मगर संघ यु. के. को केन्द्रिय समितिमा प्रवेश गरे देखि अहिले सम्म निरन्तर लागेको छु भने २०१० मा रसमुर बोरों काउन्सिलमा कम्मुनिटी सपोर्ट अफिसर पोस्टमा रही समाजलाई drug & alcohol बारेमा educate गर्दै आएको छु । कुनै पनि परिवारलाई होस् या संस्थालाई परेको समस्या समाधान गर्न पछि नहट्ने बानीले नै निरन्तर दिएको हो जस्तो लाग्छ ।
मगर संघ युकेको उपाध्यक्षको कार्यक्षेत्रको बारेमा तथा तपाईलाई दिएको जिम्मेवारिहरुको बारेमा केहि बताइदिनु होस् न ? तथा अनुभब कस्तो रह्यो ?
कति कामहरु त केन्द्रमा पसे देखि निरन्तर गरि नै राखेको छु भने बिसेष उपाध्यक्षको भूमिका भने Foreign PR & Youth Coordinator गर्ने मौका पाए र धेरै ज्ञानहरु संगाल्ने मौका पनि पाए ।
मगर संघ युके चौथो कार्यसमितिले सफल गरेका कार्यक्रमहरु तथा तपाई सन्तुष्टि भएको कार्यहरु मध्ये एक, दुइ, तिन गरि बताइदिनु हुन्छकी ?
१) नेपालमा पूर्व मन्त्री गोरे बहादुर खपांगी मगर मोटर साइकल दुर्घटनामा पर्नु भयो उहाको उपचारको निम्ति ठुलो खर्च जुटाउनु पर्यो सहयोग संकलन हुदै गर्दा सिंगापुरमा ओपेरेशनको लागि एक मुस्ट पैसा तत्काल पठाउनु पर्ने भयो तेती खेर मगर संघ केन्द्र बाट दस हजार पौण्ड ऋण लिएर पैसा पठाऊन सकेउ । त्यो ऋण तिर्न सकिन्न कि भन्ने पिर थियो तर ऋण तिरेर पनि अझै चार लाख रुपैया थप उपाचारको लागि पठाउन सकेउ भने जम्मा पच्चीस हजार पौण्ड भन्दा बढी रकम उठाउने सफल भयो ।
गोरे ब.खपांगी राम्रो सँग निको हुनु भएको छैन तर अहिले सम्म उहालाई बचाँउन सकेकोमा खुसि लागेको छ ।
२) तेस पश्चात गत साल नेपालमा गएको ठुलो भूकम्पले देशै रुवायो अन्य संघ संस्थाहरु जस्तै मगर संघ यु के ले पनि सहयोग जुटाउने तिर लाग्यौँ अन्य देशमा रहेका मगर संघहरु संग सम्पर्क गरि नेपाल मगर संघ मार्फत भुकम्प पिडित ठाउँ हरुमा सहयोग गर्नेमा केहि भूमिका निभाउने गरे ।
३) Magarat Campaign जहाँ पनि media ले ठुलो भूमिका खेल्छ त्यो चाहे सकारात्मक होस वा नकारात्मक । नयाँ नेपाल निर्माणको लागि सबै नेपालीहरु लागि परेको अवस्थामा हामी बिदेशमा रहेता पनि आफ्नो देश प्रतिको चासो हरेक नेपालीमा हुनु स्वाभाविकै हो तर monopoly media ले नकारात्मक समाचार मात्र फैलाए । जनतालाई भ्रममा पारी देश टुक्र्याउने र जातीय लडाई हो भन्ने जस्ता नकारात्मक खबर मात्र दिएको पाइन्छ तेसैले media को fight media ले नै गर्नु पर्छ भनि नेपालमा विभिन्न जिल्लामा रहेको मगर पत्रकार हरुलाई पहल गरियो फलस्वरूप हाल सम्म २५ वटा जिल्लामा मगर आमसंचार कर्मीहरु खडा गरियो भने गएको फाल्गुन १७ गते काठमाडौँ मा Magar Journalists Mass Meeting सम्पन्न गरियो । एक सय भन्दा बढी मगर पत्रकारहरुको भेला ले केन्द्रिय समिति चयन गरि हाल वहाहरुले www.magarmedia.com वेबसाइट संचालन गर्दै भबिस्यमा powerful magar media बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
तपाइ एउटा लोकल काउन्सिलको निजामति कर्मचारी र मगर संघ युकेको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पोस्टमा रहेर काम गर्दा कस्तो अनुभब रह्यो बताइदिनु हुन्छ कि ?
लोकल काउन्सिल को कर्मचारीमा drug & alcohol education को काम गर्ने हो तर त्यो मात्र नभएर अन्य कुनै पनि समाजमा आइ परेका कामहरुमा पनि उत्तिकै मदत दिदै आएको छु भने मगर संघ केन्द्रमा रहेको हुनाले मेरो लोकल काउन्सिल मात्र नभएर अनन्य ठाउमा पनि मदत दिन मगर संघ बाट मौका पाएको छु ।
मगर संघ युकेको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा तपाई भबिस्यमा मगर संघ युकेको नयाँ कार्यसमितिमा बसेर काम गर्ने योजना छ कि छैन बताइदिनु होस् न ?
२००६ बाट मगर संघ यु. के. को केन्द्रिय समितिमा विभिन्न पदमा रही काम गरियो धेरै अनुभन बटुलेको छु तेसैले अब यी सिकेको ज्ञानलाई अरुलाई सिकाउने समय भएको महसुस गरेको छु तेसैले अबको कार्यसमितिमा नेतृत्व गर्ने निर्णय लिएको छु ।
यदि मगर संघ युकेको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुनु भयो भने के गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? एक, दुइ, तिन गरेर बताइदिनु सक्नु हुन्छ कि ?
यदि मैले मगर संघ यु. के. को नेतृत्व गर्ने मौका पाएमा गर्दै आएको काम लाई निरन्तरता दिनुत छदैछ त्यो माथि यी निम्न काम हरु गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
१) Support to branches: ११ वटा साखाहरु मध्धे कति साखाहरु inactive अवस्थामा छन् ति साखाहरु लाई active बनाउने पहल गर्ने थिए ।
२) Membership drive: कति मगर हरु साखा नभएको town हरुमा छन् उहाहरुलाई कुनै एउटा नजिक को साखामा आबद्ध बनाउने र केन्द्रको आजीवन सदस्या बनाउनेमा जोड दिने थिए ।
३) Interaction programme: साखा बाहेक कति मगरहरु अनन्य नामकरणले पनि देखा परेको स्थिति छ ति group हरु संग interaction गर्ने बेवास्था मिलाउने थिए साथै बुद्धि जिबिहरुसंग छल फल गर्ने बेवास्था मिलाई उहाहरुको सुझाबनुसर मगर संघ लाई अगाडी बढाउने थिए ।
४) Youth Generation gap: मगर हरुको मात्र नभएर यु.के. मा सबै नेपाली संघ संस्थाहरुले यो महसुस गरेको कुरा हो कि Youth Generation संग gap छ । बिगत तिन वर्षमा मैले ४ र ५ वटा Youth workshop गरि अनुभब बटुलेको छु । आउने कार्यसमितिमा ३ जना active युवा नानीहरुनै केन्द्रीय समितीमा पस्ने मिलाएको छु जसको सहायताले भाबी कार्यक्रम हरुमा युवा सक्ति पस्ने छन् ।
५) Sports: बिगतमा वर्ष दिनमा एक पटक लखन थापा कप आयोजना गर्दै आएता पनि लखन थापा लाई प्रथम सहिद घोसनाको माग बाहेक खासै sports मा मगर संघ ये.के. चिनिदैन तेसैले मगर खेलकुद टिम खडा गर्ने मन लागेको छ ।
६) Promote MAUK to other fellow organisations: यु. के.मा रहेका अन्य संघ संस्था हरुसंग मगर हरुलाई चिनाउने ।
१) बिगत केहि वर्ष यता अन्तरास्ट्रिय मगर हरुको नेटवर्क सुरु गरि मगर संघ ये. के. लाई संयोजक दिए तापनि केहि प्रबिधि को कारणले अगाडी बढ्न नसकेको अवस्था छ यस लाई ससक्त रुपमा अगाडी बधाई अबको २ वर्ष भित्र कुनै एउटा देशमा अन्तरास्ट्रिय मगर कन्फेरेन्स गर्ने विचार छ ।
२) अन्य देशका मगर संघहरु संग मिलि Global Magar Development प्रोजेक्ट हरु ल्याउने जस्तै मगर बिस्व बिद्यालय खोल्ने ।
३) Magarat Campaign लाई support गर्नु ।
४) Magar Media लाई support नेपाल मा मात्र नभएर एसले global service दिन सक्ने बनाउने विचार छ ।
संसार भरि छरिएर बसेका मगर तथा नेपालीहरुलाई केहि संदेश छ कि ?
संसार परिबर्तान्सिल हो परिबतन हुन्छ तर पलायन हुनु हुदैन हामी जहाँ गए पनि आफ्नो पहिचान र संस्कार छोड्नु भुल्नु हुदैन भन्न चाहन्छु ।
जिन्दकी एक अनौठो उपाहार हो जहिले तहिले सुखको खोजि गरेको हुन्छ तर दुखले पछ्याएको हुन्छ जस्तो लाग्छ । धन्यवाद
Last Updated on Monday, 21 March 2016 17:32
Last Updated on Thursday, 31 March 2016 15:06
पार्टीले मलाई जहाँ आबश्यक ठान्छ म त्यही काम गर्छु
यही मङसीर १२ गते शनिबार संघीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी जिल्ला समिति रुपन्देहीको आठौ जिल्ला अधिवेसन हुँदै छ । यस अबधीमा जिल्लाको नेतृत्व कुशलतापुर्वक पुरा गरेर पार्टी र जनताका लागि एउटा महत्वपुर्ण अध्याय पुरा गर्नुभएका पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष झमबहादुर गुरुङ्गसंग समग्रमा उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो यस विषयमा समिक्षात्मक रुपमा संवाद गरेका थियौँ ।
उहाँको यस कार्यकालमा देशको समग्र अबस्था महत्वपुर्ण तथा अत्यधिक चुनौतीपुर्ण पनि रह्यो । महत्वपुर्ण तर विषम परिस्थितीमा पनि रुपन्देहीमा पार्टीका तर्फबाट अभिभावकको रुपमा गुरुङ्गले अन्य पार्टी , स्थानिय सरकारी निकाय , संघसंस्था , सञ्चार माध्यम , पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुसंगको सम्बन्ध र समन्वय अरु थप उचाईमा पुर्याउन सफल हुनु भएको छ ।
पार्टीको सांगठनिक साथसाथै पार्टी संरचना ब्यबस्थापनमा पनि उहाँको योगदान महत्वपुर्ण रह्यो । र उहाँ स्वयं चाहे जति उच्च योगदान र काम सम्पादन गर्न समय अपर्याप्तता भएता पनि नराम्रो चाँही केही पनि नगरेको कुरा पनि उपलब्धी मान्नु हुन्छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष झमबहादुर गुरुङसंग राज्यसत्ताको तर्फबाट सनु थापा मगरले गर्नुभएको संवादको संक्षिप्त अंश ।
– तपाइको कार्यकालमा भएका सम्झन योग्य उपलब्धीका कामहरु के –के हुन् ?
सबैभन्दा पहिला त गत बैशाखको भूकम्पमा क्षती भएका विभिन्न ठाउँहरुमा पार्टीको तर्फबाट धेरै – थोरै राहत संकलन र वितरण गर्ने काम गर्यौं ।
यसबाहेक जनताहरुको अधिकार र मुक्तिका लागि पछिल्ला समयमा भएका आन्दोलनहरुमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गरेका छौं । जनतालाई सचेत गराउने प्रयास गर्यौ रुपन्देहीको ७ ओटै निर्बाचन क्षेत्रमा रहेका जनताहरुलाई जागृत गर्ने काम पनि हामिले गर्यौ । सरकारले गरेका विभिन्न गल्तिहरुमा खबरदारी संगसंगै झकझक्याउने काम पनि गर्यौं । जनतालाई सत्तामा रहेका पार्टीहरुले भ्रममा पार्ने काम पटक – पटक भयो र भईरहेको छ यस सन्दर्भमा पनि शासकहरुलाई खबरदारी र जनतालाई शुसासनका बारेमा बताईरहेका छौं । पार्टीको आफ्नै जिल्ला भवन निर्माण कार्य पनि अघि बढिरहेको छ ।
– यो समितिमा काम गर्न कतिको सजिलो भयो ?
आन्तरिक रुपमा समिति भित्र कुनै पनि विवाद नरहेकाले यसमा खासै असहयोग भन्ने रहेन । सबै समितिका साथीहरुका कारणले गर्दा नै आज रुपन्देहीमा पार्टीले राम्रो गर्न सकिरहेको छ ब्यापक जनसमर्थन संगै उचाई लिईरहेको छ । यसकै फलस्वरुप पछिल्लो निर्बाचनमा जनताको अत्यधिक माया पाउन सफल भयौं । जसको उदाहरणको रुपमा म स्वयंलाई जनताहरुले त्यती धेरै भोट दिएर सहयोग गर्नु भएकै हो यसमा म पराजित भए पनि खुसी छु । यसैले गर्दा समग्रमा समिति भित्र काम गर्न त्यस्तो कुनै अप्ठेरो भएन र छैन ।
– तपाईको कार्यकालमा गर्न अधुरा काम के – के रहे ?
म र समितिका सम्पुर्ण साथीहरु आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको काम गर्नका लागि खटिरहने क्रममा कहीँ कतै कामहरु पुरा गर्न अझै बाँकी नै छन् । आन्तरिक रुपमा भन्नु पर्दा आफ्नै जिल्ला भवन निर्माण कार्यको बाँकी काम पुरा हुन बाँकी छ । जनताको हिसाबमा भन्नु पर्दा जनताको मुक्तिका लागि पहिचान सहितको संघीय संविधान भनेका थियौं त्यो लडाँइ जारी नै छ । यसबाहेक आन्तरिक रुपमा पार्टी सुदृढीकरण र संगठन बिस्तार गर्ने काम अझै बाँकी नै छ । कुनै– कुनै ठाउँमा जनताको मन जित्न सकिएको छैन ति ठाउँहरुमा अझै मेहनतको जरुरी छ । तर जिल्लाको नेतृत्वमा पुनः रहे वा नरहे पनि नयाँ तथा अधुरा कामहरु पुरा गर्नका लागि खटीरहने छु ।
– पार्टीको शिर्ष तहबाट सहयोग कस्तो रह्यो ?
हाम्रो जिल्ला भित्रको आन्तरिक मामिलामा त्यस्तो अप्रिय खालको कुनै पनि केन्द्रको हस्तक्षेप चाँही रहेन । माथीको सर्कुलर हामीले पालना पनि गरेका छौं । एक वर्ष अगाडी पौष १६ गते “लुम्विनी प्रदेशमा स्वागत छ ” लेखिएका बोर्ड प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको चार वटा नाकामा राख्ने क्रममा केही विवादहरु सरकार संग भयो । यस विषयमा हामीले केन्द्रसंग कुनै समन्वय गरेका पनि थिएनौ । तर, पनि माथीबाट त्यस्तो कुनै किसीमको असहयोग रहेन । केन्द्रिय समितिका साथीहरुबाट राम्रो सहयोग रहेको छ ।
– जिल्लामा मसिना गुटबन्दीको बिस्तार भएको देखन्छ नि ?
राष्ट्रिय पार्टी भएको नाताले अन्य पार्टी तथा क्षेत्रबाट साथीहरु पार्टीमा आउने क्रम जारी छ जस्ले गर्दा पार्टी फराकिलो भाको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ साथिहरुलाई यड्जस्ट हुन गाह्रो हुन सक्छ अन्यथा अरु त्यस्तो केही पनि छैन ।
– आफ्नो कार्यवधीलाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
मैले २०६८ साल बैशाख १९ गते देखी जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेको हुँ । करीब ४ वर्ष ७ महिना काम गरि सकेको छु । अलिकती ईटा थप्ने काम गरेको छु जस्तो लाग्छ । जिल्लामा प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गर्ने काम गरे । जनताहरुलाई पार्टीको तर्फबाट सुसुचित गर्ने काम पनि भयो । कुनै – कुनै निर्बाचन क्षेत्रमा पार्टीको उपस्थिती भने जस्तो गरी गर्न सकिएन होला । दोश्रो संविधान सभाको चुनाब पनि भएको कारणले गर्दा पार्टीले गर्नु पर्ने होमवर्क थुप्रै रहे त्यसमा हामीले सक्दो प्रयास गर्यौ। पार्टी भवन बनाउने काम ७० प्रतिशत सम्पन्न गर्यौ । सांगठनिक मजबुतीलाई पनि बिस्तार र सवल बनाउने प्रयास भयो । मानवीय नाताले हुने गल्ति र कमीकमजोरीहरु रहे होलान । राम्रो धेरै गर्न नसके पनि नराम्रो चाँही केही पनि गरिएन ।
– मुख्य चुनौतीहरु के– के रहे ?
राज्यका तहबाट विभेदमा पारिएकाहरुलाई उठाउन अझै सकिएन । उठाउने अधिक्तम प्रयत्न रह्यो तर चाहे जती उठाउन सकिएन । केही मात्रामा दलित समुदायलाई सचेत बनाउन सक्यौ । आदिवासी , जनजाति , मधेसी , मुस्लिम विभेदमा परेका वर्ग ,क्षेत्र ङ्गि , र समुदायका हक र अधिकारलाई स्थापित गर्ने लडाँई सकिएको छैन ।
– पार्टीले अब कस्तो दिशा र नीति लिनु पर्छ ?
पार्टीले अझसम्म ईमान्दारिता ब्यबहार देखायो । आफ्नो माग र मुद्दाहरु निकै शालिन ढङ्गले राख्यो । तर अब जनताको अधिकार स्थापितका लागि , विकासका लागि , जनताका हितका लागि पार्टी ठोक्किनु पनि पर्छ । पार्टी अब हरेक कुरामा आक्रामक , एग्रेसिभ ढङ्गबाट अगाडी बढ्नु पर्छ । अझ सम्म गाडी फुटालेको छैन , रास्ट्रिय सम्पत्ति वर्वाद गरेको छैन तर पार्टी अब ठोक्किनु पनि पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
– भू.पू.हरुले चलाएको पार्टी भन्छन् , सम्भव छ ?
भू.पू.हरु जनतासंग परिचित नभएको हुनसक्छ । तर भू.पू.हरु सहनशिल , अनुशासित ,जुझारु , अनुभवी र खारिएका ब्यक्तिहरु हुन् । भू. पू. को पार्टी भन्न मिल्दैन किनकी भू.पू. पनि जनता नै हुन् । कुनै पनि जनताले पार्टीमा रहेर काम गर्छ भने भू.पू.को अथवा एबीसीडीको मात्र पार्टी भन्न मिल्दैन । भू.पू.हरु जहिले पनि सत्य र ईमान्दारिताको पक्षमा लड्ने ब्यक्तिहरु हुन् न्यायका पक्षधर हुन् । यसले गर्दा संघीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी पनि यस्तो पार्टी हो जो जनताको मुक्ति र हितका लागि मात्र काम गर्छ यसले गर्दा उनीहरुको भावना बढी मेल खाने भएको नाताले यो पार्टीमा रहेर काम गरेका हुन् र उनीहरुले काम गर्दैमा लाहुरेको पार्टी भन्न मिल्दैन । केही कुरामा कमीकमजोरी हुन सक्छ तर सुधार गरेर लान सक्नु पर्छ ।
– अधिवेसनबाट जिल्लाको फेरी नेतृत्व लिनु हुन्छ ?
यसमा मेरो केही पनि सोँचाई बनेको छैन । मलाई चाहाना पनि छैन कि नेतृत्वमा फेरी निरन्तरता नै दिउ भन्ने तर काम चाँही गरिनै रहन्छु । यस सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको हुनाले पार्टीले मलाई जहाँ आबश्यक ठान्छ म त्यही काम गर्छु ।
– अधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?
पार्टीको आठौं जिल्ला अधिवेशनका लागि तयारी तिब्र गतिमा अगाडी बढीरहेको छ । करीब २ सय प्रतिनीधि , पर्यवेक्षक रहने पक्का भएको छ । खुला सत्र , बन्द सत्र सम्पन्न गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरु बनाएर तयारी गरिरहेका छौं । अत्यधिक सफल र भब्य बनाउनका लागि उपसमितिका जिम्मेवारी पाएका साथिहरु पुर्ण मेहनतका साथ खटिरहनु भएको छ ।
– अन्त्यमा , अरु भन्न ईच्छा लागेका विषयहरु ?
वर्तमान परिवेशमा देश अत्यन्त जिर्ण अबस्थामा छ । यथास्थितीवाद लाद्ने प्रयत्न हुँदैछ । भ्रष्ट चरित्र भएका ६/६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर राज्यको ढुकुटीलाई दुरुपयोग गदै छन् नेताहरु यस्तो अबस्थामा जनताहरुले पनि बुझ्न जरुरी भएको छ । जनता सचेत हुन जरुरी छ । ठुलो पार्टी भन्दै पछि नलागेर जनताका पक्षमा लड्ने नेता तथा पार्टीलाई देश सुम्पिनु पर्दछ । अहिले जुन समस्या देखिएको छ यो सबै जनताहरुको गलत रोजाईले गर्दा नै भएको हो । त्यसैले अब जनता स्वयं सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ ।
र जनतालाई शास्ति नदिन र वर्तमान समस्यालाई सही ढङ्गले हल गर्न नेताहरुले प्रयत्न गरुन । यो संगै संघीय गणतान्त्रीक जनमुक्ति पार्टी जिल्ला समिति रुपन्देहीको आठौं अधिवेसन भव्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न गर्नका लागि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता , सम्पुर्ण बुद्धिजीवी , राजनीतिज्ञ ,ब्यापारी , उद्योगी , किसान , मजदुर , सञ्चारकर्मी सबैलाई अर्थपुर्ण उपस्थितीका लागि आग्रह गर्दछु ।
Last Updated on Friday, 27 November 2015 17:26
इखले बनायो गायक
रत्यौलीजस्तै तीजे गीत – हरिदेवी कोइराला